Thread matepi Information - China Eternal Friendship Ptfe Tape
Thread matepi zvinoshandiswa kunama, tsvedzesa, uye kudzivirira nepfari pamusoro Threaded nekiyi, panhengo, uye Fittings. Vari inowanzobvunzwa vachinzi:
puramba kuti tepi
Thread matepi kazhinji yakagadzirwa polytetrafluoroethylene (PTFE), zvikuru crystalline, perfluorinated polymer kuti nani unozivikanwa yayo Dupont muchiso uye vakanyorwa mazita-Teflon. PTFE tepi ane zvikuru pasi coefficient pamusoro kukweshera, zvakanaka makemikari nemishonga, uye wakanaka nokupisa nemishonga. Chemical inertness kunodzivisa muchinjikwa Linking uye anoita PTFE shinda matepi kusarudza zvakanaka mafomu dzinosanganisira kungatikanganisa makemikari zvakadai mvura okisijeni, kana caustics yakadai Ammonium hydroxide. Thread matepi zvinogona kuitwa polyethylene (Pe), mumwe rweruzhinji mapurasitiki ungapikisa mvura uye makemikari akawanda.
Thread matepi kutakura nokurondedzerwa akadai:
PTFE shinda tepi bhizimisi anorondedzera zvigadzirwa zvavo sezvo kana mukuru arambe achirema kana yakaderera arambe achirema. High arambe achirema PTFE shinda matepi kazhinji vane arambe achirema pamusoro .70 g / cm3 kana 1,2 g / cm3. Low arambe achirema PTFE shinda matepi kazhinji vane arambe achirema pamusoro .37 g / cm3. simba Tensile ndiro simba kunodiwa kuti kutyora chimedu shinda tepi kuburikidza kudhonza pamusoro pakatarisana miromo. Elongation ndiye fractional kuwedzera imwe shinda tepi kuti urefu nokuda kushushikana mune makakatanwa kana kuti chafariz kuwedzera. miganhu Inokosha shinda matepi zvinosanganisira urefu, upamhi, uye ukobvu. Panyaya substrate kugarisana, vamwe matepi Teflon zvakagadzirirwa kushandiswa ne nyere, sepombi, kana yaisvitsa migero zvakagadzirwa aruminiyamu, vatema simbi, kana ndarira. Other PTFE shinda chisimbiso tepi inoomerera Chrome, mhangura, girazi, mapurasitiki, kana rabha.
PTFE shinda matepi vanotevera mbiri dzinokosha unhu mitemo uye vane mavara-coded zvakasiyana-siyana mafomu. Thousand-T-27730A ari US uto Specification (thousand-SPEC) kuti kutaura risingamboshandisi Ukobvu 3 mils. AA-58092 ndiyo zvokutenga mwero anoramba pakukora chinodiwa thousand-T-27730A, asi anowedzera risingamboshandisi arambe achirema mureza. White PTFE shinda tepi inopa zvakasimba nezvisimbiso zvakasiyana-siyana Threaded mapfundo zvakakodzera zvikuru pombi dzemvura uye potable mvura enyika. Yellow PTFE shinda tepi akagadzirirwa kushandiswa ne nyere, yaisvitsa migero, nekiyi dzaro, mavharuvhu, uye Threaded gasi mitsetse kuti takura mhepo, amoniya, butane, kuiisa chlorine, kana rehydrogen. Pink Teflon tepi chakagadzirwa rinorema-basa, maindasitiri PTFE giredhi uye rinoshandiswa zvebhizimisi kana maindasitiri pombi zvikumbiro. Green Teflon shinda matepi aitwe okisijeni-achidzorera zvikumbiro.